INdlu yokuThululelwa kuMlambo iFalse - I-Airbnb
INdlu yokuThululelwa kuMlambo iFalse
Indlu yonke sinombuki zindwendwe onguJoshua And Amanda
UJoshua And Amanda yi-Superhost
Eli khaya linazo zonke izinto ezenza kube lula ukonwabela ubomi kwiyadi enkulu yamanzi, i-pier egqunyiweyo, igumbi lelanga nokunye. Ikhitshi inendawo eninzi yokonwabisa kwaye ingaphandle kwigumbi lelanga, yenza indawo entle yokuxhoma enemibono ebanzi yechibi. Ikhaya lihlala ngokulula kwiintsapho ezintathu kwaye wonke umntu unendawo yabucala yokubaleka kude nesihlwele. Chitha iintsuku okanye ubusuku bakho edokhini okanye uziphose eyadini ngelixa usenza izosa. Ngaphantsi kweemayile ukusuka edolophini.
Ikhaya elihle kwicala leNdlela eNtsha yoMlambo iFalse onomtsalane! Indlu ilala 12. Amagumbi okulala amathathu aphezulu makhulu. Ezantsi, uya kufumana igumbi lokuhlambela kunye negumbi lomdlalo elineping pong, iWii kunye nemidlalo emininzi kunye neemuvi. Kukho igumbi elimanzi / lodaka ngasemva kwipatio esebenza njengeyona ndawo ifanelekileyo yokuxhoma iitawuli kunye nokugcina izinto ezidadayo. Igumbi elimanzi linxibelelana negumbi elikhulu lokuhlamba impahla elinewasha kunye nesomisi. Izinto eziluncedo zangaphandle ziquka indawo yokuloba eneepali zokuloba, iphenyane, ibhodi yokubhexa kunye neeflothi. Ubomi emlanjeni abukho ngcono kunobu!
Siza kukuqalisa ngezinto ezisisiseko zasendlwini, njengephepha langasese, iitawuli zephepha, iingxowa zenkunkuma kunye neepods zokuhlamba izitya. Kukho ishampu, i-conditioner kunye nezixhobo zokuhlambela umzimba kuzo zombini iishawari. Oku kufuneka kukugcine kwiintsuku zakho zokuqala ezimbalwa.
Ikhitshi igcwele yonke into oyifunayo. Zonke izinto ezisisiseko zikhona kunye nezinto ezininzi ezongezelelweyo, kubandakanywa igriddle, i-fryer, i-blender, i-mixer, i-toaster, iimela zefayili, njl njl. Umenzi wekofu upheka imbiza epheleleyo. Ngokuqhelekileyo kukho izihluzi zekofu, i-nondairy creamer kunye neswekile kwikhabhinethi. Kukwakho nedlanzana leziqholo ezisisiseko. Ukugcina abantwana bexakekile, kukho iitoni zeemuvi, imidlalo yebhodi, iWii, itshokhwe kunye nebhodi, iikhrayoni kunye neencwadi zemibala, njl.njl. Ngaphandle, kukho i-charcoal grill, iibhatyi zobomi, amaphenyane, ibhodi yokubheqa, iipali zokuloba, iintambo ezidadayo, idama. iinoodles, kunye nomdlalo wecornhole.
**Qaphela: Ichibi liya kutsalwa phantsi phakathi kwe-9/15/21-1/15/21.
** Qaphela: asiwavumeli amaqela okanye iminyhadala. Oku kuthetha ukuba ekuphela kwabantu abavumelekileyo kwipropati ngabo babalwe kwindawo oyibekileyo.**
Ngaphantsi kwe-mayile ukusuka entliziyweni yeNdlela eNtsha, thatha uhambo lokuhamba uye kwiiparades, iindawo zokutyela, iminyhadala okanye imisebenzi yasedolophini. Thatha kumdlalo we-LSU ezantsi kwendlela okanye ujonge yonke into eyenziwa yiFelicianas kunye neNatchez, iMS.
Umbuki zindwendwe ngu- Joshua And Amanda
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- New Roads